ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချဖို့ ဆိုရင် သရ၀ဏ်(ပြည်) | dawnmanhon
၀န်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချဖို့ ဆိုရင် သရ၀ဏ်(ပြည်)
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖွဲ့ တဖွဲ့ ကိုလိုအပ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မလိုအပ်သဖြင့်ဖျက်သိမ်းပစ်ရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း အငြင်းပွားနေကြပါသည် ။ တပ်ချုပ်ကို ညွှန်ချုပ် Level ဟုပြောခဲ့သဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်ဖြိုးမင်းသိန်းရာထူးမှပြုတ်တော့မလိုလဲ ကောလဟလများပြောနေကြပါသည် ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ကိုဖြိုးမင်းသိန်း က မဘသအဖွဲ့ ကို မလိုအပ်ဟု ပြောကြားခဲ.ခြင်းဖြစ်ပြီး ၊ အဖွဲ့ တွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားနေကြသူများကလိုအပ်သည်ဟူ၍ပြောကြားလာခြင်းဖြစ်သည် ။မလိုအပ်ဟုပြောကြားသော ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံတော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသံဃမဟာနာယက( မဟန)အဖွဲ့ ရှိနေပြီးဖြစ်သဖြင့် နောက်ထပ် အဖွဲ့တခုထပ်ရှိနေဖို့ မလိုဟုသူ့ ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပါသည် ။ သူ့ ထင်မြင်ချက်ကို ၀န်ကြီးချုပ်ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက သံဃနာယကအဖွဲ.အား ၇.၇.၂၀၁၆ နေ.နံနက် ဆရာတော်သံဃာတော်များအားသြ၀ါဒခံယူဖူးတွေ့ ရင်းလျှောက်ထားခဲ.သည်ဟုသိရ၏ ။
အမျိုးဘာသာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(မဘသ) အဖွဲ့ ကြီးကလဲဝန်ကြီးချုပ်ပြောစကားကိုလက်မခံပါယ်ချလိုက်ပြီး မ.ဘ.သ မလိုအပ်ဆိုသောစကားကို ပြောကြားခဲ.သည့်အပေါ်တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့မေတ္တာရပ်ခံလွှာပေးပို့ သွားမည်ဟုသိရသည် ။ထိုကိစ္စကို တပါတ်အတွင်းမဖြေရှင်းပေးပါကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးထောက်ခံမည့်လှုပ်ရှားမှုများပါပြုလုပ်မည်ဟုကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းထိန်ကတော့ မ.ဘ.သ (ဗဟို)၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုန့် ပြန်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ.၏ ။အချို့ ကလည်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုလူထုကရွေးချယ်ထားသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးကာရာထူးမှဖြုတ်ချမည်ဖြစ်ကြောင်းဖေ.စ်ဘွတ်တွင်ပြောဆိုနေကြပေ၏။ ယခုဆောင်းပါးသည် ထိုအဖွဲ့ ကြီးလိုအပ်သည် ၊ မလိုအပ်သည်ကို ဝေဖန်ပြမည့်ဆောင်းပါးမဟုတ်ပါ ။၀န်ကြီးချုပ်တယောက်ဘယ်လိုအာဏာရလာသည် ၊ မည်သည့်အခြေအနေတွင် ရာထူးမှဖြုတ်ချ၍ရသည် ။မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြုတ်ချ၍မရ ၊ မည်သို့ ဖြုတ်ချရသည်ဆိုသည်များကို ဥပဒေကြောင်းအရ ရှင်းလင်းတင်ပြလိုရင်းဖြစ်သည် ။
လူတော်တော်များများမရှင်းမလင်းဖြစ်နေသောကိစ္စ ၊သေသေချာချာ နားမလည်သောကိစ္စမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလို ၀န်ကြီးချုပ်သည်လည်း ပြည်သူက မဲဆန္ဒဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်နေကြခြင်းဖြစ်သည် ။ရွေးကောက်ပွဲတွင်နိုင်မှ (အရွေးခံရ၍လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူကိုမှ) ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် တင်မြှောက်ခံရမည်ဆိုသည်ကားမှန်၏ ။ သို့ သော် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန်.အပ်ခံရသည့်အချိန်ကစ၍ သူသည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏အကြီးအကဲဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သည် ။ ဤနေရာ၌ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထု၏လက်မှတ်များကိုကောက်ခံမည် ။ ထိုလက်မှတ်များဖြင့်ပြန်လည်ဖြုတ်ချမည်ဆိုခြင်းမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုသောအခါ ပြုလုပ်သည့် Right to Recall ဟူသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည် ။ ထို Right to Recall ဥပဒေပင်သည်လျှင် ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက လက်မှတ်ရေးထိုးလာလျှင်လက်ခံစဉ်းစားမလဲဟူသည်. ရာခိုင်နှုန်းကိစ္စကိုအတိအကျ မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပဲ ဦးရွှေမန်းလက်ထက်က ဆိုင်းငံ့အဖြစ် ထားခဲ့ရသောဥပဒေဖြစ်သည် ။ လက်ရှိလက်ခံထားသော မဲဆန္ဒရှင် စုစုပေါင်း၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတိုင်တန်းချက်ကိုတင်ပြရမည်ဟူသည့်ပြဌာန်းချက်သည်ပင်လျှင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတိုင်ကြားနိုင်ခြင်းဖြစ်၍ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့်မပါတ်သက်ပေ ။ ရှင်းအောင်ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်း (၇)တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် (၇)ခု အတွက်စုစုပေါင်း ၀န်ကြီးချုပ် (၁၄)ယောက်ရှိသည့်အနက်မည်သည့်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမှ လူထုဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့်ဖြုတ်ချခွင့်မရှိချေ ။၀န်ကြီးချုပ်ကို ခန်.အပ်စဉ်ကသမ္မတကနာမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီး သမ္မတမှတစ်ပါး မည်သူမျှဝန်ကြီးချုပ်များကိုဖြုတ်ချခွင့်မရှိချေ ။ထို့ ထက်အလွန်ပြောရလျှင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သော်မျှ ၀န်ကြီးချုပ်တယောက်ကိုသူ့ သဘောနှင့်သူဖြုတ်ချပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိချေ ။ ၀န်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချပိုင်ခွင့် (စွပ်စွဲပြစ်တင်ပိုင်ခွင့် ) အာဏာသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(သို့ မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှာပဲရှိလေသည် ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချပိုင်ခွင့်အာဏာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှတပါးမည်သူ့ ထံတွင်မှမရှိ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖြုန်ချပိုင်ခွင့်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှတပါးမည်သူ့ ထံတွင်မှမရှိကြောင်းပြောလိုရင်းဖြစ်သည် ။
၀န်ကြီးချုပ်တယောက်ကို ရာထူးမှဖြုတ်ချလိုပါက လွှတ်တော်တွင်စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုပြုနိုင်ကြောင်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ပုဒ်မ ၂၆၃ (တိုင်းဒေကြီး သို.မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် သို့ မဟုတ် ၀န်ကြီးတစ်ဦးဦးအပေါ်စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်း ) တွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထား၏ ။
၂၆၃။ (က) တိုင်းဒေကြီး သို.မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် သို့ မဟုတ် ၀န်ကြီးတစ်ဦးဦးအားအောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့်စွပ်စွဲပြစ်တင်နိုင်သည် -
(၂) ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း၊
(၃) အကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြားခြင်း ၊
(၄) ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားသည့်တိုင်းဒေသကြီး သို့ မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် သို့ မဟုတ် ၀န်ကြီး၏အရည်အချင်းပျက်ယွင်းခြင်း၊
(၅) ဥပဒေအရပေးအပ်သောတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း တို့ ဖြစ်သည် ။
ထိုအချက် (၅)ချက်မှတပါး မည်သည့်စွပ်စွဲချက်နှင့်မှဝန်ကြီးချုပ်ကိုအရေးယူ၍မရချေ ။ ထိုအချက်များဖောက်ဖျက်သည်ဟု ကိုယ့်ဘာသာ တဖက်သတ်စွပ်စွဲရုံမျှနှင့်လည်းမရ ၊ ၀န်ကြီးတဦးဦး (သို့ မဟုတ်) ၀န်ကြီးချုပ်တဦး ကို အထက်ပါကဲ့သို့စွပ်စွဲမည်ဆိုလျှင် ပထမဆုံး လိုအပ်သည့်အဆင့်မှာ ဥပမာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကို စွတ်စွဲပြစ်တင်မည်ဆိုလျှင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်စုစုပေါင်း၏ လေးပုံတပုံ သော လွှတ်တော်အမတ်များက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မိမိတို့ ၏လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ထံတင်ပြရမည်ဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ်ကို မလိုလားသူများသည် ရပ်ကွက်ထဲတွင်လက်မှတ်လိုက်ကောက်နေရုံနှင့်မပြီးပဲ (ကိုယ်ဖြုတ်ချလိုသည့်တိုင်းဒေသကြီး)လွှတ်တော်အမတ်များကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် အရင်ဆုံးကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည် ။ဆိုကြပါစို့လူဦးရေ ၁၂၃ ယောက်၇ှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ကို စွတ်စွဲပြစ်တင်မည့်အဆိုတခုတင်မည်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁ ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးကာ လွှတ်တော်ဥက္ကဌထံတောင်းဆိုရမည်ဖြစ်သည် ။ ထိုသို. လေးပုံတပုံကတောင်းဆိုရုံနှင့်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်သည်ရာထူးမှပြုတ်ကျသွားသည်မဟုတ်ချေ ။ ဒါသည်ပထမအဆင့်ကိုလုပ်နိုင်ရုံသာရှိသေးသည် ။ ဒုတိယအဆင့်တွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ စည်းပြီး စွပ်စွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည် ။ ထိုသို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသောအခါ စွပ်စွဲခံရသူ ၀န်ကြီးချုပ်က သူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်၍သော်လည်းကောင်း ချေပခွင့်ပေးရပေမည် ။ တတိယအဆင့်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ကတွေ့ ရှိချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဌကိုအစီရင်ခံရမည် ။ ထိုအခါ တွေ့ ရှိချက်ကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင်ချပြပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည် ။ စတုတ္ထအဆင့်သည်အရေးအကြီးဆုံး အဆင့် Key Point ဖြစ်သည် ။ ထိုအချက်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်တဦး အပြစ်ရှိမရှိ မဲပေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် စုစုပေါင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံကစွပ်စွဲမှုမှန်ကန်သည် ဟုထောက်ခံ၍ ၀န်ကြီးချုပ်သည်တာဝန်တွင်ဆက်လက်ထမ်းရွက်စေရန်မသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လျှင် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံတင်ပြအစီရင်ခံရမည် ဟုပါပေသည် ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကစွတ်စွဲခံရသောဝန်ကြီးချုပ်ကိုရာထူးမှရပ်စဲမိန့် ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါသည် ။ထို့ ကြောင့့််ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်တကယ်အပြစ်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်.သူမှာ လွှတ်တော်အမတ်အားလုံး၏သုံးပုံနှစ်ပုံ ( ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း) ဆိုတဲ.အချက်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လူဦးရေ ၁၂၃ ဦးရှိနေသောကြောင့် ထိုအထဲမှ ၆၆ ရာခိုင်နှန်းဖြစ်သော ၈၁ ယောက်က အပြစ်ရှိသည်ဟု့မဲပေးမှ ၀န်ကြီးချုပ်ကပြုတ်မှာဖြစ်သည် ။လောလောဆယ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ NLD အမတ် ၉၀ ဦး ၊ ကြံ့ ခိုင်ရေးအမတ် ၃ ဦး ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ၁ ဦး ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၃၁ ဦးရှိပေသည် ။ NLD မှလွဲ၍ အခြားအင်အားစုများမှာ တပ်မတော် ၃၁ + ကြံ့ခိုင်ရေး ၃ + ရခိုင်ပါတီ ၁ = စုစုပေါင်း ၃၅ ဦးသာရှိပေသည် ။ ထို့ ကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချရန် (စွပ်စွဲပြစ်တင်ရန် ) အနည်းဆုံးလိုအပ်သော ၈၁ မဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၌ ရနိုင်ရန်အကြောင်းမမြင်ပါ ။
နိုင်ငံရေးသည် မိမိစိတ်ထင်ရာလျှောက်လုပ်လျှောက်ပြော၍ရသည့်အရာမဟုတ် ။တိကျခိုင်မာသောအချက်အလက်အပေါ်တွင်သာအခြေခံပြီးစနစ်တကျ အလုပ်လုပ်သဖြင့် နိုင်ငံရေးကိုသိပ္ဖံဘာသာထဲတွင်ထည့်ပြီး နိုင်ငံရေးသိပ္ဖံ ( Political Science ) ဟုခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည် ။ မိမိထင်မြင်ချက်ဖြင့် အကိုးအကား အခြေအမြစ်မရှိလျှောက်ပြောခြင်းသည် အဆုံးသတ်၌ဘယ်နေရာမှမရောက်ပဲ ရှိတတ်သည် ။ မှန်ကန်သောအချက်အလက် မှန်ကန်သော ချဉ်းကပ်မှုကသာ ထိရောက်အကျိုးရှိတတ်ပေသည် ။ သိပ္ဖံနည်းကျတွက်ကြည့်သောအခါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချနိုင်သော အဖြစ်သည် မရှိသလောက်နည်းကြောင်းတွေ့ ရပေလိမ်.မည် ။ ဆန္ဒပြမည် ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးကောက်ခံမည်ဆိုခြင်းတို့ မှာ မိမိတို့ ၏စိတ်ခံစားချက်အရပြူလုပ်၍ရသော်လည်း တိကျသောသက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ချေ ။ နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးဥပဒေသည် ဖွဲ့ စည်းပုံခြေခံဥပဒေဖြစ်သည် ။ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံ၏ဥပဒေကြောင်းသည် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေထိုပြဌာန်းချက်အတိုင်းသာသွားမည်ဖြစ်သည် ။ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုနားမလည်ပါပဲ ၊ မလေ.လာပါပဲ ၊ မသိရှိပါပဲ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များတွင်ဝင်ပါ၍ မရ ၊ မဖြစ်ပါချေ ။ အလွဲလွဲအချော်ချော်သာဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ခန့် အပ်ရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ခဲ.သေးသည် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ အမတ်နေရာအများစုအနိုင်ရရှိခဲ့သော ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ( ANP ) ကသူတို့ပါတီမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင်အမတ်နေရာအများစုအနိုင်ရရှိခဲ့သောကြောင့် အစိုးရဖွဲ့ ရာတွင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုသူတို့ ပါတီမှဖြစ်ရမည် ။ ANP ပါတီဝင်မှ ၀န်ကြီးချုပ်နေရာမရခဲ့ပါက အစိုးရအဖွဲ့ ထဲတွင်မပါဝင်တော့ပဲ အတိုက်အခံအဖြစ်သာရပ်တည်မည်ဟု အရေးဆိုခဲ့ပေသည် ။ NLD ပါတီကလည်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီခေါင်းဆောင်ဦးအေးမောင်၏စကားကို ဆန့် ကျင်ကာ NLD ပါတီမှ ဦးညီပုကိုသာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုခန့် အပ်ခဲ့ပါသည် ။ အမှန်တော့ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ သည် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များကို သေသေချာချာမသိပဲ ( သို့ မဟုတ် )သိလျက်နှင့်မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုတောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် (သို့ မဟုတ် )တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကို သမ္မတက ရွေးချယ်အဆိုပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် နှင်းတိုင်းဒေသကြီလွှတ်တော်များကခန်.အပ်ရမည်ဟုဆိုထား၏ ။ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ထိုက်သည့်သူများ၏အရည်အချင်းများကိုလည်း ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေက သတ်မှတ်ပြဌာန်းထား၏ ။ပုဒ်မ၂၆၁ အရ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်မည့်သူသည်
(၁) အသက် ၃၅ နှစ်ပြည့်ရမည်
(၂) နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသောသူ ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ ၊ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသူ
(၃)ပုဒ်မ ၁၂၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိစေသောပြဌာန်းချက်များနှင့်ငြိစွန်းခြင်းမရှိသူ
(၄) နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအပေါ်သစ္စာရှိသူ
ဖြစ်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားပေသည် ။ ထိုအရည်အချင်းများနှင့် မပြည့်စုံကြောင်းအထင်အရှားမပြသနိုင်လျှင် သမ္မတကအမည်စာရင်းတင်သွင်းလာသူကိုခန်.အပ်တာဝန်ပေးရန်ငြင်းပယ်ခွင့်မရှိစေရ ဟု ပုဒ်မ ၂၆၁ (ဃ) တွင် တိတိကျကျရေးသားထားသည် ။ ဆိုလိုရင်းမှာ သမ္မတမှ ၀န်ကြီးချုပ်ခန့့် မည် ။ ထိုသူသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် မကိုက်ညီဟု သက်သေမပြနိုင်ပဲ ဟိုလူ.မကြိုက်ဘူး ဒီလူ့ ခန်.ပါဟုပြော၍မရ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက သမ္မတခန်.မည့်ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းကို လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးရုံပဲရှိသည် ။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ထိုပြဌာန်းချက်သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်ဖြစ်သည် ။ထိုအခြေခံဥပဒေသည် NLD ကရေးဆွဲခဲ.သောဥပဒေမဟုတ်ပေ ။ တပ်မတော်ကဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၉၂.၄ ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်သူလူထုက အထောက်ခံကြီးထောက်ခံခဲ့သည်ဟု (ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် ) စစ်အစိုးရ က တဖွဖွပြောခဲ့သော အခြေခံဥပဒေကြီးဖြစ်သည် ။ ထိုဥပဒေအရ ၀န်ကြီးချုပ်ကိုသမ္မတကခန့် ခြင်းဖြစ်ရာ ထိုခန့်အပ်မှုကိုသဘောမတူပါက ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါထိုပြဌာန်းချက်ကိုသဘောမတူလက်မခံကြောင်း ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုစစ်အစိုးရကရေးဆွဲနေစဉ်ကဖြစ်စေ ၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းငါးနှစ်အတွင်းကဖြစ်စေ ဦးအေးမောင်တို့ အဖွဲ့ ကပြင်ဆင်ခြင်း ကန့်ကွက်ခြင်း ပြုရပေမည် ။ ထိုစဉ်က တပ်မှလာသောဝန်ကြီးချုပ်များလက်ထက်က အလိုတူအလိုပါငြိမ်နေကြပြီး NLD အစိုးရမှတင်လာသော ၀န်ကြီးချုပ်ခန်.အပ်ကာမှ မိမိပါတီဝင်ကိုခန်.အပ်ပါဟူသည် ဥပဒေဘောင်မ၀င်ခြေ ။ ထိုသို့ သောတောင်းဆိုမှုကို ရှမ်းတို့ ကလည်းမတောင်းဆိုခဲ့၊ မွန်တို့ ကလည်းမတောင်းဆိုခဲ့ ၊ အခြားတိုင်းရင်းသားများကမတောင်းဆိုပဲ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှသာတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းကထိုပါတီခေါင်းဆောင်များ၏နိုင်ငံရေးသင်ရိုးမကြေခြင်း နှင့် ပါတီစွဲ လူမျိုးစွဲကြီးခြင်းကိုမြင်သာစေသည် ။ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတကခန့် အပ်ခြင်းကို မိမိတို့ ကလက်ခံရမည့်တာဝန်ရှိနေသည်ကိုသဘောပေါက်သင့်ပေသည် ။ အကယ်၍ဖြစ်သင့်သည်မှာ နောင်အခါ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်အခါ ၀န်ကြီးချုပ်ခန်.အပ်ခြင်းကို သမ္မတကခန်.အပ်ခြင်းအစား ပြည်နယ် နှင့်တိုင်း လွှတ်တော်များက ခန်.အပ်ခွင့် ပြဌာန်းပေးပါဟု အစိုးရ ၊တပ်မတော်တို့ အာ့း ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှပူးပေါင်းတောင်းဆိုသင့်ပေသည် ။
ထိုသို့ ဆိုသဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်များသည် မည်သို့ မျှ ရာထူးမှပြုတ်ကျနိုင်ခွင့်မရှိတော့ပဲထင်ရာစိုင်းကြတော့မည်ဟုဆိုလိုရင်းမဟုတ် ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော စွပ်စွဲပြစ်တင်နိုင်စရာအကြောင်း ၅ ချက်မှ တချက်ချက်ကိုအမှန်တကယ်ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ပါက မိမိပါတီဝင်ချင်းဖြစ်စေကာမူ ဥပဒေပြုအမတ်များက ၀န်ကြီးချုပ်ကို ကာကွယ်ပေးမည်မဟုတ်ချေ ။ သို့ သော် လူတယောက် ၊အဖွဲ့ တဖွဲ့ ကမကြေနပ်၍ ဆန္ဒပြရုံလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုရုံနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်တွင်ဘာမှထိခိုက်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာပြောလိုရင်းဖြစ်သည် ။ယခုအဖြစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်သည် နိုင်ငံတော်၏ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းလည်းမဟုတ် ၊ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းလည်းမဟုတ် ၊ အကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြားခြင်း လည်းမဟုတ် ၊ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားသည့်တိုင်းဒေသကြီး သို့ မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် သို့ မဟုတ် ၀န်ကြီး၏အနည်အချင်းပျက်ယွင်းခြင်းလည်းမဟုတ် ၊ ဥပဒေအရပေးအပ်သောတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း လည်းမဟုတ်သဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်အပေါ်တရားဝင် အပြစ်တင်စွပ်စွဲစရာရှိလာမည်မဟုတ်ချေ့။ နိုင်ငံရေးလုပ်မည်ဆိုလျှင် တည်ဆဲဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ တော့လိုပေလိမ့်မည် ။ထိုသို့ နားလည်ပြီးမှသာ ကန့်ကွက်ခြင်း ဆန့်ကျင်ခြင်း ဆန္ဒပြခြင်း ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် အဓိပါယ်ရှိရှိလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။
dawnmanhon: ၀န်ကြီးချုပ်ကိုဖြုတ်ချဖို့ ဆိုရင် သရ၀ဏ်(ပြည်)